Eleghi anya oge iji chegharịa atụmatụ gị mgbe ... | Martech Zone
Ma eleghị anya, oge na-echeghari gị Strategy Mgbe…
Friday, May 30, 2008 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Y’oburu n’itughari ihe gi n’eme ka ikike gi bawanye ahia - ikekwe nka abughi uzo. Zigara otu enyi m saịtị Jason, na ọ chọtara obere obere ikpe ọmụmụ a otú a ụlọ oriri na ọ pushedụ pushedụ pushing ha 1/2 price pụrụ iche na ihe fọrọ nke nta okpukpu abuo ahia ha.
Ego ole ka ederede Blog?
Jun 1, 2008 na 2:59 AM
Ajụjụ bụ, ha okpukpu abụọ ahịa ha nkeji ma ọ bụ dollars? Agaghị m enwe ike ịkọ mmiri nke latter
Jun 1, 2008 na 9:53 AM
O doro anya na e nwere ụfọdụ nsonaazụ ebe ahụ na onye ahịa nwere obi ụtọ zuru oke iji nyere aka dee akwụkwọ ọcha. Ọ bụ naanị nhọrọ na-adịghị mma ị ga-etinye dị ka 'nsonaazụ azụmaahịa'.
Echere m na ha nwere 1/2 price ere na ụfọdụ ngwaahịa, ikekwe ha appetizers, na ha wee okpukpu abụọ ha n'ozuzu ahịa kwa ahịa na entrees.
Jun 1, 2008 na 8:42 AM
Gini mere ị ga-eji kwusi na ego 1/2? Ha nwere ike itinye ihe ndị ahụ na ọnụahịa 1/4 ma jiri okpukpu anọ karịa ahịa ha!
Jun 1, 2008 na 9:54 AM
Nke ahụ bụ ihe m nọ na-eche! 🙂
Jun 2, 2008 na 8:39 AM
Ọ na-echetara m akụkọ - amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị - gbasara otu nwa okorobịa nke mere ka ire ezé abụọ dị okpukpu abụọ site na ịba ụba nke oghere na ọkpọkọ ahụ.